မိန်းကလေးတွေကသူတို့ရည်းစားကိုလှည့်စားနေတာကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာကိုပြောပြတယ် - သတင်း
အဖွဲ့ Khloe သည်အမှိုက်သရိုက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမကြာမီကလေးငယ်၏ဖခင်ဖြစ်လာပြီးကတည်းကမည်သည့်အသံမျှ ပို၍ ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ Tristan Thompson ကသူမကိုလိမ်ညာနေသည်။
ကလေးငယ်များကို WOMB မှအချိန်မရွေးမောင်းထုတ်နိုင်သည့်ကိုယ်ဝန် Khloe Kardashian သည်ယခုအချိန်တွင်ကလေးငယ်အသစ်နှင့်သာအသက်ရှင်ရန်သာမကသူမ၏ယောက်ျားသည်မြွေတစ်ကောင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။
Daily Mail (သို့) အခြားအတင်းအဖျင်းဆိုဒ်များမှတဆင့်ရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ရည်းစားအားအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ဝေးနေပြီဟုပြောရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်စစ်ဆေးရန်အတွက်၊ မိန်းကလေးများအားသူတို့၏ရည်းစားကသူတို့ကိုလှည့်စားနေသည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရောင်ဆိုးသောနည်းများကိုပြောပြရန်ပြောခဲ့သည်။
သငျသညျအနညျးငယျ mama အခါတိုင်းငါတို့သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သနည်း
မျှဝေသည် ခလို 6:24 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 9, 2018 ရက်တွင် (@khloekardashian)
ချိတ်ဆက် Uber အကောင့်
သူ၏ Uber သည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကိုလိမ်ညာနေသည်ကိုသိလိုက်သည်။ အင်္ဂါနေ့၊ စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသူ ၃၂ Cressy လမ်းမကြီးကိုသူဘယ်သူသွားနေသလဲလို့ငါမေးတဲ့အခါသူကထွက်သွားဖို့လမ်းမရှိပါဘူး။ - ကတ်၊ ၂၀ နှစ်
ငါရည်းစားဟောင်းမှာရည်းစားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုငါရည်းစားသိတယ်။ သူမသူ့ကိုအမြဲတမ်းဖုန်းခေါ်ပြီးကျွန်မကမင်းကိုသတိရသလိုမျိုးကျပန်းစာတွေပို့လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကသူမကိုအမြဲတမ်းစွဲလမ်းမှု၊
တစ်နေ့မှာတော့သူကသူဘာမှမစဉ်းစားတော့ဟုမထင်သောကြောင့်၊ ငါသူ့ပြားချပ်ချပ်တံခါးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကငါ့ကိုငါ့ကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ဒီအဆင်မပြေတံခါး - ခြေလှမ်းအခြေအနေမှာသူ့ဖုန်းကိုအဆက်မပြတ်မြည်ခဲ့သည်။ ငါသိလာမည့်အရာ, ဒီဟောင်းသူသည်သူမနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုအချိန်အိပ်ပျော်နေသောကြောင့်, သူ့တိုက်ခန်းမှထောင့်လှည့်လည်လာမယ့်နေသည်။ - နှင်းဆီ, 22
သူကအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လည်ပင်းညှစ်နေသောကလပ်ပုံတစ်ပုံတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားခဲ့သည်ကိုသိလိုက်သည်။ သဘာဝကျကျ လူတိုင်း လွှ။ - Chloe, 19
သူဟာသူ့ Instagram ကိုကျော်ဖြတ်သူပါ
ငါသူသည်သူ၏ရည်းစားနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ချင်ပါတယ်သူတို့လက်တွေ့ကျကျလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်ရှိရာတကယ့်ပြင်းထန်သောရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှထွက်လာသောကပြောသည်သူကိုအကြောင်းကိုလေးလကြာယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူရတဲ့ခဲ့သည်။ ဒါကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါ။ ဒါကြောင့်သူဟာသူခံစားခဲ့ရမယ့်ခံစားချက်တွေ၊ မပြီးဆုံးသေးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နည်းနည်းအန္တရာယ်များနိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့တယ်။
ကျမတစ်နေ့ကျရင်အိမ်ရှင်မနဲ့အတူပျင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူမကို Instagram ပေါ်မှာ cheeky lil stalk ပေးဖို့ကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အပြာရောင်ထဲကဘာကိုငါတွေ့ရလဲ။ ထိုနေ့သူတို့ကိုအတူတကွရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ - သုံးနှစ်ပျော်ရွှင်စွာအတူနေထိုင်ခြင်း<3. – Jess, ၂၅ နှစ်
ငါ FaceTime ကိုငါ့ရည်းစားနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးသူကမင်းရဲ့တီရှပ်ကိုလမ်းမှာဒီမှာထားခဲ့သလိုမျိုး။ ငါမဟုတ်ခဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ သူကဒါကိုသေချာဂရုစိုက်ပြီး“ အဲဒါမင်းရဲ့ဥစ္စာပဲ” လို့ပြောတယ်။
ရင်သားကင်ဆာoverရိယာမှာထောပတ်သီးနှစ်ဝက်လောက်ပါတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့စတိုင်မဟုတ်ပါ။ ငါကဲ့သို့သောထိပ်တန်းဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုထင်လျှင်, ငါပထမ ဦး ဆုံးအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးသငျသညျငါ့ကိုလုံးဝမသိရကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်အားလုံး၏ fuck ဆိုတဲ့မိန်းကလေးသင်၏အခန်းထဲမှာကျန်ရစ်?!?!! - အဲလစ်၊ ၂၂ နှစ်
ငါနဲ့ငါ့ရည်းစားဟောင်းပြိုကွဲသွားတယ် ငါသူ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်ခဏမနေခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါအလုပ်လုပ်ငါ့လမ်းပေါ်တွင်သကဲ့သို့ငါ၏အဝတ်ပြန်ယူရန်သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်နေ့။ သူကကျွန်တော့်ကိုအဝတ်အစားတွေအများကြီးပေးတယ်။ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခု ပစ္စည်း။ သူသည်ထိုအချိန်ကသူ့အိမ်တွင်နေထိုင်သောသူ့မိခင် မှလွဲ၍ အခြားအစ်မများသို့မဟုတ်မိန်းမများမရှိခဲ့ပါ။ - Ellie, 21 နှစ်
ငါ့ရည်းစားကသူ့အကောင်းဆုံးကောင်မလေးနဲ့နွေရာသီမှာသွားနေတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် uni တစ်လျှောက်လုံးအတော်လေးနီးကပ်ခဲ့ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ငါလေးပတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံနေရာချထားအပေါ်ကြောင့်ငါသူတို့နှင့်အတူမသွားနိုင်ဘူး။
အလုပ်မှာ, ငါ့ရည်းစားရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတက်လာ။ သူတို့ကသူမသူမ shagging 100 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟုငါ့ကိုအစဉ်မပြတ်ဆေးကြော - သူတို့စာသားသူတို့ကျိန်းသေအတူတူခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုပြက်လုံးအောင်ရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
ငါဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကွဲကွာပြီးနှစ်လအကြာမှာသူကကျွန်တော့်ကို WhatsApp မှာစာပို့ပြီးမင်းကိုမင်းကိုငါ့ကိုသိသင့်တယ်၊ Jen ကိုအားလပ်ရက်မှာအတူတကွစုရုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမလှည့်စားခဲ့ဘူး၊ အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံးတလျှောက်ခဲ့ကြသည်ညာဘက်ခဲ့ကြသည် !! - ဂျက်စီကာ, 23
ငါလအနည်းငယ်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြသောဤကောင်လေးလုံးဝဆက်ဆံရေးအတွက် ဦး တည်ခဲ့သည်ထင် - သူသည်ငါနှင့်အတူရုတ်တရက်တကယ်ကွဲကွာ။ ပြည့်စုံတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအားဖြင့် နောက်တစ်နေ့မနက်မှာလူတွေရဲ့ Snapchats ကိုကြည့်နေတယ်။ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုခေါ်။ လုယူချင်သောသူမ၏အဖော်၏ဤ Snapchatting သူငယ်ချင်းများကိုကြည့်နေသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်နှင့်ခွဲခွာလိုသောသူနှင့်တူသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါခဏအကြာတွင်သူကအကြောင်းနောင်တမရခဲ့ဘူးအဖြစ်သူ့ကိုအကြောင်းကိုရင်ဆိုင်သောအခါငါမထင်ခဲ့ပေ။ - Olivia, 21